Costa Rica Minista njem nlegharị anya Giant Nzọụkwụ maka ntuli aka UNWTO ọhụrụ na njem nlegharị anya ụwa n'ozuzu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Costa Rica Minista njem nlegharị anya Giant Nzọụkwụ maka ntuli aka UNWTO ọhụrụ na njem nlegharị anya ụwa n'ozuzu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
The Hon. Gustav Segura Costa Sancho, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Costa Rica, nọ n'etiti njem nlegharị anya ụwa taa. Ọ na-ewere nzọụkwụ dị ukwuu maka ọdịnihu nke njem nlegharị anya ụwa n'ịchọ votu nzuzo maka nkwenye nkwenye UNWTO General Assembly na-abịa iji kwado ma ọ bụ jụ Secretary General Zurab Pololikashvili maka oge 2022-2025.
The Hon. Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Costa Rica, Gustavo Segura Sancho, gwara odeakwụkwọ ukwu UNWTO taa, Hon. Zurab Pololikashvili, banyere Costa Rica na-arịọ arịrịọ nzuzo maka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu na UNWTO General Assembly na-abịanụ na Madrid.
Costa Rica ghọrọ mba mbụ n'ihu ọha na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịnweta nkwenye maka okwu nke abụọ maka odeakwụkwọ ukwu kpebiri site na nkwanye ùgwù.
Nke a bụ nnukwu nzọụkwụ na-aga n'ihu maka ụwa n'ọgụ maka ntuli aka ziri ezi na ọkwa a nke malitere na 2017 na nhazi mbụ nke Secreteray Zurab Pololikashvili.
N'akwụkwọ ozi mepere emepe nke ndị odeakwụkwọ ukwu UNWTO abụọ gara aga bịanyere aka na ya na ndị isi ndị ọzọ bụbu ndị ọrụ UNWTO bịanyere aka na ya, ma kesara ya. Kọmiti na-akwado ndị njem nlegharị anya n'ụwa na Monday, a tụrụ aro ngwa ngwa na dị ka isiokwu 43 nke UNWTO Iwu nke Usoro nke General Assembly, na-arịọ a nzuzo votu na nke a burukwa ihe, ma ọ bụrụ na votu na-ekpebi, inye ndị Executive Council ka ha malite ọhụrụ na. usoro ntuli aka kwesịrị ekwesị.
Kpọmkwem nke a mere taa na Costa Rica na-ebute ụzọ na mberede na mmegharị a.
Ugbu a mba ndị na-aga Nzukọ Mgbakọ UNWTO na Madrid site na Nọvemba 28 - Disemba 3 nwere ike ịtụ vootu n'eziokwu n'atụghị egwu. Ọ bụrụ na 2/3 nke votu ahụ kwadoro nkwenye nke Council Executive ka ịhọpụta ọzọ Zurab Pololikashvili, a ga-ahọpụtakwa ya ọzọ. Ọ bụrụ na Zurab enwetaghị 2/3 nke votu, a ga-enwe ntuli aka ọhụrụ nwere ndị ọhụrụ ga-eduga UNWTO maka oge 2022-2025.
Na 2019, ntinye aka na Costa Rica maka njem na njem nlegharị anya bụ 13.5% nke GDP, na-eme njem na njem nlegharị anya ihe dị mkpa. Costa Rica, bụ obodo Republic of Costa Rica, bụ obodo dị na Central America nke dị n'akụkụ Nicaragua n'ebe ugwu, Oké Osimiri Caribbean n'akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ, Panama n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ, Oke Osimiri Pasifik dị na ndịda ọdịda anyanwụ, yana Ecuador dị na ndịda Cocos Island. . Costa Rica dị ihe dị ka nha Denmark.
Nke a bụ akwụkwọ ozi Costa Rica degara UNWTO Secretariat Madrid taa:
Costa RIca chọrọ ntuli aka nzuzo na UNWTO General Assembly 2021
San Jose, Nọvemba 15, 2021
Onye nwe ugwu
Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO)
Ezigbo odeakwụkwọ ukwu:
N'ịkpọkọta ekele ekele anyị, were ohere ahụ na-ezo aka na Point 9 de la agenda nke Nzukọ Ọchịchị na-esote nke nzukọ a kpọrọ "Nhọrọ nke Secretary General maka oge 2022-2025 site na ntụnye nke Council Executive".
N'akụkụ a, agbakwunyere nkwenye anyị na n'ime usoro a, ọ ga-emerịrị iwu siri ike nke nzukọ a, ọkachasị n'ụdị gafere maka UNWTO, anyị na-arịọrịrị:
Na nhọpụta nke Secretary-General n'ihi na oge 2022-2025 ka eme ya site na vootu nzuzo nke ndị niile nọ ugbu a na ndị dị irè dị ka ekwuru na ụkpụrụ mmanye. iwu ahụ mmekọrịta dị n'etiti steeti/UNWTO.
Arịrịọ a gbadoro ụkwụ na Nkeji edemede 43 nke iwu ọgbakọ ọgbakọ nke kwuru:
"Nkebi nke 43. A ga-eme ntuli aka niile, yana nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu, site na vootu nzuzo".
Anyị na-arịọ ndị odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO ka ọ were ihe niile anụ ahụ na teknụzụ dị mkpa ka anyị wee nwee ike ịgbaso n'ụzọ kwekọrọ n'iwu nke ugbu a maka ntuli aka site na ntuli aka nzuzo maka onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO na-esote.
Minista njem nlegharị anya nke Costa Rica